सारा संसार लगाए ताला, गरिबले के खाला..? | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
सारा संसार लगाए ताला, गरिबले के खाला..?
१० जेष्ठ २०७७, शनिबार १४:५४
लकडाउनले गर्दा पर्यटक आउने ठाउँ ठमेल सुनसान छ । पर्यटकले भरिभराउ हुने ठमेलका गल्लीहरू खाली छन् । क्युरियो पसल, रेस्टुरेन्ट, पब, डान्स क्लब, दोहोरी सबै बन्द छन् । मान्छे नै नभएपछि के खुल्थे त !
तैपनि म कोही मान्छे भेटिहाल्छ कि भनेर ठमेल नरसिङ चोकमा सारङ्गी बोकेर बसिरहेको छु । म डम्बर गन्धर्व । गाइने मेरो पेसा हो । म पर्यटकलाई सारङ्गीको धुन सुनाएर नै परिवार पाल्थेँ तर कोरोनापछि भने पर्यटक आउन बन्द भयो ।
म २०२८ सालमा गोरखाबाट काठमाडौँ आएको हुँ । तर यतिका वर्षमा यस्तो पीडा कहिल्यै भोग्नु परेको थिएन । जीवनमा अहिले जति सास्ती कहिल्यै सहनु परेको थिएन । मैले भूकम्प र नाकाबन्दी दुवै भोगेँ । भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा पनि ठमेलमा पर्यटक हुन्थे । आना, सुका आम्दानी हुन्थ्यो, गुजारा चल्थ्यो ।
मैले सारङ्गी रेटेपछि मात्र मेरो घरमा चुल्हो बल्छ । गल्कोपाखामा ५ जनाको परिवार छ मेरो । ५९ वर्ष पुगे म । लकडाउन भएपछि घरमा खाद्यान्न सकिएको छ । घरमै बसेर खान मिल्दैन भनेरै म पुलिसको लाठी सहेर पनि सडकमा आएको हुँ ।
सारङ्गी सुन्ने कोही भेटियो भने पैसा दिन्छन् कि भनेर आएको तर सडकमा त चरो मुसो कोही छैन । लकडाउनको तेस्रो सातादेखि नै मेरो कोठामा खाद्यान्न सकियो । त्यसयता म ‘कोही भेटिन्छ कि’ भन्ने आसमा दिनहुँ ठमेल आउँछु ।
मनमा कहिलेकाहीँ कसैको घरमा गएर सारङ्गी रेटौँ भन्ने पनि लाग्छ तर अहिले सबैको घरका ढोका, गेट बन्द नै छन् ।
यसरी सधैँ सारङ्गी बोकेर निस्किए पनि आम्दानी नभए पनि खाना बाँडिरहेको ठाउँबाट खाना लिएर जान्छु । कति ठाउँमा त खाना घर लग्न दिन्छन्, कति ठाउँमा लान पाइँदैन । यसरी आफू खाएर घरमा खाना लग्न नपाउँदा साह्रै चित्त दुख्छ । घर जाँदा, अलिकता चामल लिएर गए बुढी पनि खुसी हुन्थी कि भन्ने लाग्छ ।
बाहिर निस्क्यो मान्छेको सम्पर्कमा आयो भने कोरोना सङ्क्रमण हुनसक्छ भन्ने त थाह छ तर ज्ञानले भोक मेट्दैन ! डर त कोलाई छैन र ? ज्यानको माया कोलाई छैन र ? ज्यानभन्दा ठुलो भोक भएपछि कसको के लाग्छ र ? त्यसैले, सारङ्गीमा आफ्नै विरहको गीत गाउँछु बस्छु… ‘सारा संसार लगाए ताला, काम छैन, गरिबले के खाला ?’
यो कथा डम्बर गन्धर्वसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित भएर लेखिएको हो ।
यो अन्योल कहिलेसम्म..?
२० आश्विन २०७७, मंगलवार १२:५४